एलोभेरा प्रयोग गर्न नजान्दा बन्न सक्छ विष, ध्यान दिनै पर्छ यी कुरा – Sandesh Press
December 13, 2020 292
काठमाडौँ । सामान्यतय हामीले एलोभेराको फाइदाबारे मात्र सुन्दै आएका छौं। तर के तपाईले यसबाट शरीरमा पर्ने नकरात्मक प्रभावबारे सुन्नु भएको छ ? विभिन्न समस्याका लागि रामबाण साबित हुने एलोभेराका पनि धेरै वेफाइदाहरु छन्।
एलोभेरामा पाइने लैक्सेटिवले तपाईलाई विभिन्न नकरात्मक प्रभावहरु पार्न सक्छ। एलोभेरा छालाका लागि वरदान सावित हुन्छ भने कतिपय अवस्थामा यसको प्रभाव उल्टो पर्न जान्छ। यसको अत्याधीक प्रयोगले छालामा बिबिरा, रातोपना र चिलाउने समस्या आउन सक्छ।
एलोभेराको दैनिक सेवनले रक्तचाप कम हुन्छ। उच्च रक्तचाप समस्या भएकाहरुलाई यसको सेवन फाइदाजनक हुन्छ तर न्युन रक्तचापका लागि यो विष साबित हुनसक्छ।
मुटु सम्बन्धी समस्या भएका मानिसहरु एलोभेराको सेवनबाट टाढा रहनुपर्छ। यसको दैनिक सेवनले अनियमित धड्कन र कमजोरीको समस्या हुन्छ।
यदि तपाईलाई कब्जियत वा मलमुत्रको समस्या छ भने एलोभेराको जूस सेवन गर्नबाट बच्नु उपयुक्त हुन्छ। एलोभेरा जूसमा पाइने लैक्सेटिवले इरिटेबल बावेल सिंड्रोमको समस्या बढाउँछ। यसको सेवनले पखाला, पेट दुख्ने र लूज मोशनको स्थिति आउन सक्छ।
एलोभेराको सेवनले शरीरमा पानीको कमि वा डिहाइड्रेशन उत्पन्न गराउन सक्छ। एलोभेरामा पाइने लैटेक्सले शरीरको मांशपेशीलाई कमजोर बनाउँछ । यसकारण चिकित्सकको सल्लाह बिना यसको सेवन गर्नु हुँदैन।
गर्भवती महिलाले यसको सेवन गर्नु हुँदैन। यसमा पाइने लैक्टेटिंग प्रोपर्टीले गर्भवती महिलामा समस्या ल्याउन सक्छ। यसको सेवनले पाठेघर साँघुरो हुनसक्छ, जसले गर्दा बच्चा जन्मने क्रममा समस्या आउँछ।
Prevकुन राशि भएका व्यक्तिले कुन दिशामा धनसम्पत्ती राख्दा हुन्छ फलिफाप ?
Nextरेडलाईट एरियाका युवकले इमरान र सन्नीको छोरा भनेपछि बलिउडमा हंगामा !
नेपालको राष्ट्रिय झण्डा फहराउदै इन्डोनेशियन गायिका सानिया,